MRB Occupancy counter HPC usoro
Enwere ike ịkpalite mkpu na ọnụ ụzọ site na counter Occupation
3D/2D/Infrared/ AI counters dị na ọnụ ala dị ala ịzụta
Enwere ike ijikọ na nnukwu ihuenyo iji gosi ọkwa obibi.
Enwere ike ịtọ oke nzọ site na ngwanrọ efu anyị
Jiri ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ PC mee ntọala ahụ
Njikwa ọnụnọ maka ụgbọ njem ọha dịka ụgbọ ala, ụgbọ mmiri..wdg
Ngwa ndị ọzọ: mpaghara ọha dịka ọba akwụkwọ, ụlọ ụka, ụlọ mposi, ogige wdg.
Ọtụtụ n'ime anyị Ọnụ ọgụgụ ndị bibụ ngwaahịa ikike ikike. Iji zere mpụ, anyị etinyeghị ọtụtụ ọdịnaya na webụsaịtị. Ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ ahịa anyị ka ha ziga gị ozi zuru ezu gbasara anyị Ọnụ ọnụ ụlọ.
A na-arara usoro ngwaahịa a maka ndị counter occupancy nke njikwa obibi, ya bụ, mgbe ọ ghọtara na ọ gafere uru a na-etinye, a ga-eziga mkpu iji nweta nzube nke ịchịkwa ọsọ nke ndị mmadụ, anyị nwere ọtụtụ ụdị nke. Ọnụ ọgụgụ ndị bi maka ntụaka gị.
Na njedebe nke 2014, otu nnukwu obodo dị na China enweghị usoro nchịkwa ndị mmadụ na mbụ, nke kpalitere nnukwu ihe omume. Na Disemba 31, obodo a ahazighị ihe omume ememme Afọ Ọhụrụ, mana ọtụtụ ndị ka na-aga obodo ahụ ozugbo. A na-eme otu ebe mara mma n'obodo ahụ maka Afọ Ọhụrụ, ma na-atụghị anya ya kpatara ọdachi. Ihe kpatara ọdachi ahụ kpọmkwem bụ na ngagharị ndị mmadụ na Bund karịrị akarị. N'ihi na enweghị usoro njikwa ndị mmadụ, enweghị ọnụ ọgụgụ na-abịa n'oge iji gbasaa mgbasa nke ndị mmadụ. Yabụ ugbu a, ka anyị kwuo maka yaỌnụ ọnụ ụlọ.
Kedu ka esi agụta oke mmadụ dị otú ahụ? Nke a ga-abụrịrị ọkachamaraỌnụ ọnụ ụlọ. Ọnụ ọnụ ụlọbụ ngwaahịa ọhụrụ dabere na infrared, 2D, 3D, AI na teknụzụ ndị ọzọ. Ọ nwere ngụ ziri ezi yana nnyefe data kwụsiri ike. Ihe kacha mkpa bụ ọrụ nke mobile smart terminals, nke na-adaba adaba na ngwa ngwa.Ihe mmetụta ọnụ ọgụgụ mmadụ na-edekọ ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-asọba n'ime oke ọrụ dị irè, ma na-ebufe data ahụ na mobile terminal maka nyocha site na ngwanrọ, na data nyochara nwekwara ike ibupụ ya ozugbo iji mepụta akụkọ.
Ihe mmetụta ọnụ ọgụgụ mmadụ nwekwara ike iwekota nnukwu data. A na-ejikarị ya eme ihe na nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ngosi ihe ngosi, ọbá akwụkwọ, ebe a na-eme ihe nkiri, ọdụ ụgbọ okporo ígwè, na ụfọdụ ebe ndị njem nleta na ebe ọha na eze ndị ọzọ, n'ihi na ọbịbịa nke ndị mmadụ na ebe ndị a buru ibu nke ukwuu na-achọkwa ọkachamara.Ihe mmetụta ọnụ ọgụgụ mmadụịnakọta ọnụ ọgụgụ. MRBIhe mmetụta ọnụ ọgụgụ mmadụ nwere ike iwepụta data ndị mmadụ na-erugharị n'oge ọ bụla dị ka ọ dị mkpa, ma nwee ike ịmepụta eserese site na elekere, ụbọchị, izu, ọnwa na afọ, ka o wee nwee ike ịgbakọ ọnụ ọgụgụ ziri ezi, jikọta data, na budata akụkọ na njedebe ekwentị. Enwere ike ịme nchọgharị na njikwa obibi n'otu oge. Mgbe mgbagharị nke ndị mmadụ gafere uru edobere, a ga-akpalite mkpu
MRB Onokwa vidiyo vidiyo
Anyị nwere ọtụtụ ụdị IR Ọnụ ọnụ ụlọ, 2D, 3D, AI Ọnụ ọnụ ụlọ, a na-enwe mgbe niile nke ga-adabara gị, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-akwado ihe kachasị mma Ọnụ ọnụ ụlọ maka gị n'ime awa 24.
Nke gara aga: MRB ikuku ndị mmadụ na-emegide HPC005
Osote: MRB HPC168 igwe njem akpaka maka ụgbọ ala
Ntụle obibi ụlọ
Ọnụ ọgụgụ mmadụ
Sensọ Counter Occupancy
Ọnụ ọgụgụ obibi
Igwe nleba anya n'onodu
nchekwa agụta usoro
igwefoto na-adọpụ uche mmadụ
njikwa ndọpụ uche ọha
usoro ndọpụ uche ọha
Ụlọ ahịa Obe